မတူပီမြို့ တွင် မတူ ဖိုရမ် စတင်ကျင်းပ - Khonumthung News Group
You are at:Home»Headline»မတူပီမြို့ တွင် မတူ ဖိုရမ် စတင်ကျင်းပ
မတူပီမြို့ တွင် မတူ ဖိုရမ် စတင်ကျင်းပ
By admin on	 April 15, 2014 Headline
ချင်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း မတူမျိုးနွယ်စုများနေထိုင်သည့် မတူပီမြို့ တွင် မတူဖိုရမ်တရပ်ကို ယနေ့ မှစ၍ ကျင်းပပြုလုပ် လျက်ရှိသည်။ ယနေ့ ဧပြီ ၁၅ ရက်နေ့ မှ ၁၇ ရက်နေ့ အထိ ကျင်းပမည့် ယင်းဖိုရမ်တွင် မတူမျိုးနွယ်စုများ၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှု ပိုမို အားကောင်းလာစေရေးနှင့် အနာဂတ်လုပ်ငန်းချမှတ်နိုင်ရေး၊ အနာဂတ်ပညာရေး၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်ကျင် ပြသနာနှင့် မတူမျိုးနွယ်စုများ၏ အနာဂတ်အရေး၊ အနာဂတ် စီးပွါးရေး၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး စသည့်ကိစ္စများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြမည် ဖြစ်သည်။
ယင်းဖိုရမ်တွင် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရမှ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးအုန်းလွင်က ယခုကဲ့သို့မတူမျိုး နွယ်စုများ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ရေးအတွက် ဖိုရမ်တစ်ရပ်ပြုလုပ်ကျင်းပခြင်းအပေါ် အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်း၊ ဖိုရမ်၏ ရည်ရွယ်ချက် အတိုင်း ရှေ့ ဆက် လုပ်ဆောင် ရာတွင် အောင်မြင်မှု ရရှိနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ပြော ကြားခဲ့သည်။
ကိုယ်စားလှယ် (၃၅၀) ခန့် တက်ရောက်သည့် အဆိုပါ ဖိုရမ်တွင် မတူမျိုးနွယ်စုများ “ရှေ့ သို့အတူအကွ ချီတက်ကြစို့ ” ဆိုသည့်ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် ဖိုရမ်ကို မတူပီမြို့ ပေါ်ရှိ မတူပီနှစ်ခြင်းအသင်းတော် (Matupi Baptist Church) ဘုရားကျောင်းတွင် ပြုလုပ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းဖိုရမ်တွင်တက်ရောက်သည့် မတူပီမြို့ ၏ မြို့ မိမြို့ ဖ ဦး ထန်ကောလ်က “ဒီလိုမျိုး ဖိုရမ်တရပ် ကျင်းပနိုင် အောင် ကြိုးစားအားထုတ်သူများအပေါ် ကျေးဇူးတင်တယ်၊ ကျေးဇူးတင်ထိုက်လောက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင် တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်တာပါ။ ဖိုရမ်ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း နေရာဒေသအသီးသီးရှိ မတူမျိုးနွယ်စုများ၊ ဘာသာ ရေး ဂုဏ်းဂဏ အသီးသီး၊ နိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီးနဲ့အခြားအဖွဲ့ အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူများက မတူမျိုး နွယ်စု တခုလုံးအတွက် တညီတညွတ်တည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အထူးလိုအပ်ပါတယ်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
သုံးရက်ကြာ ကျင်းပမည့် ဖိုရမ်တွင် မတူမျိုးနွယ်စု စည်းလုံးညီညွှတ်မှု ပိုမိုအားကောင်းရေးနှင့် အနာဂတ် စာတမ်းကို Rev. Van Peng မှလည်းကောင်း၊ မတူဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေ စာတမ်းကို U Ngai Sak မှလည်းကောင်း၊ မြန်မာ့နိုင်ငံ ရေးနှင့် မတူအနာဂတ် စာတမ်းကို U Thang Yen မှလည်းကောင်း၊ မတူအမျိုးသမီးအခွင့်အရေး စာတမ်းကို Sayama Aye Li မှလည်းကောင်း၊ နိုင်ငံဘတ်ဂျက် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် သယံဇာတ အရင်းအမြစ်များတူးဖေါ်ရေး ပွင့်လင်းမြင်သာ မှု စာတမ်းကို Naw Tamu Phaw နှင့် Nyo Mar Than တို့ မှလည်းကောင်း၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်း ကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ရေး စာတမ်းကို Saya Simon Thang မလည်းကောင်း၊ အနာဂတ် မတူစီးပွါးရေးနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း စာတမ်းကို Brother Ling John မှလည်းကောင်း၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး စာတမ်းကို Salai Van Ni Bawi မလည်းကောင်း၊ မတူအမျိုးသားများ၏ အနာဂတ်ပညာရေး စာတမ်းကို Salai Jimmy Rizar Boi မှလည်းကောင်း၊ မတူလူငယ်နှင့် အနာဂတ် စာတမ်းကို Salai David Van Boi Mang မှလည်းကောင်း အသီးသီး တင်ပြဆွေးနွေးသွားကြ မည်ဖြစ်သည်။
မတူမျိုးနွယ်စုများအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပထမနေ့ဖိုရမ်တွင် သဘာပတိအဖြစ်U Ngai Sak နှင့် U Mai Lawng တို့ မှ တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်ကြပြီး ဖိုရမ်ကို ကျင်းပပြုလုပ်ကြသည်။
ထိုနည်းတူ မတူပီမြို့ နယ်ရှိ ဇိုသုန်မျိုးနွယ်စုများကလည်း လိုတော (Lo Taw) ကျေးရွာတွင် ဖိုရမ်တရပ် ကျင်းပပြုလုပ် နေကြောင်း သိရှိရသည်။
မတူ ဖိုရမ် အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံး
Lian Uk on April 15, 2014 6:47 pm
it is certainlyavery good idea to held such forum on local developmen . Chin people in Matupi area are regarded to bewho gain the fastest rate of developmentin all parts of the Chin local societies..A University profeesor from US who ever did research on Matupiare ever has commented that their development rate here is so fastt that ti is like as if it is exploded. In my experience people in Matupi are very adoptable to any custom I should say, they can speak like Burmese in the Burmese mood and so is other Chin dialects especially Haka dialect which many of them speak it as tif it is their mother tongue. They can change their mood like the Burmese if they speak toaBurmese and canchange to Chins mood if they speak in Chins. Haka Lasi dialect is one of the widest spoken dialects inthe Northern Chin State and their command of speaking Haka as their mother tongue shapes them destine them to become leaders in the Chin State as they speak both the dialects of the north hwhic are all very close to each other. So they are tobe themost advanced areas inthe Chin state as ther demand in Chindialects speeaking could make them advance faster ththan the rest of the Chin people Lnk.